သင်္ကြန်မှာအပြင်ထွက်မကဲဘဲ အိမ်ထဲမှာနေပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်း(၈)ခု - Real Gaming Myanmar
သင်္ကြန်မှာအပြင်ထွက်မကဲဘဲ အိမ်ထဲမှာနေပြီး ပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်ဖြတ်သန်းနိုင်မယ့်နည်းလမ်း(၈)ခု
သင်္ကြန်လိုအချိန်မျိုးကို တစ်ယောက်တည်းအိမ်တွင်းပုန်းပြီးဖြတ်သန်းဖို့ဆိုတာ တော်တော်ကိုမလွယ်တဲ့ကိစ္စပါ။ သူများတွေက အပြင်ထွက်ကဲနေကြတဲ့အချိန်မှာ ကိုယ်တစ်ယောက်တည်း အိမ်မှာနေနေရတာက တစ်ယောက်တည်းနေရတာ ကြိုက်တဲ့သူတောင် စိတ်ထဲမှာတစ်မျိုးဖြစ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့် အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အပြင်ထွက်လည်ဖို့ထက် အိမ်တွင်းပုန်းဖို့ကိုပဲရွေးချယ်လိုက်တဲ့ သူလေးတွေအနေနဲ့ ဒီအချိန်ကို စိတ်အနှောက်အယှက်ကင်းကင်းနဲ့ ဘယ်လိုဖြတ်သန်းမလဲဆိုတာ ကြိုစီစဉ်ထားဖို့လိုပါတယ်။ ဒါကြောင့် သင်္ကြန်မှာ အိမ်တွင်းပုန်းမယ့်သူလေးတွေ အချိန်ကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချနိုင်မယ့် နည်းလမ်းကောင်းလေးတွေကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် …. ။
ဒီအချိန်မှာ ကိုယ်အပြင်မထွက်ပေမယ့် အပြင်ကအခြေအနေတွေအားလုံးကို တီဗွီအစီအစဉ်တွေကနေတဆင့်ကြည့်လို့ရပါတယ်။ တကယ်လို့ လက်ရှိအခြေအနေကို မကြည့်ချင်ဘူး၊မသိချင်ဘူးဆိုရင်လည်း ကိုယ်ကြိုက်တဲ့ဇာတ်ကားတွေကြည့်ပါ။ သူငယ်ချင်းတွေဆိုတာကလည်း သူတို့အာရုံနဲ့သူတို့ဖြစ်နေကြတဲ့အချိန်၊ ကိုယ့်ကိုနှောက်ယှက်မယ့်သူမရှိတဲ့အချိန်မို့ ဒီအချိန်လောက်ရုပ်ရှင်တွေ၊ ဇာတ်ကားတွေကို ခံစားလို့ကောင်းတာမရှိတော့ပါဘူး …. ။
စာအုပ်ဖတ်ရတာ ကြိုက်တဲ့သူတွေကတော့ ဒီအချိန်ကစာအုပ်ဖတ်လို့အကောင်းဆုံးပါပဲ။ ပိတ်ရက်တွေက ဆက်တိုက်မို့ စာအုပ်ကိုမပြီးဘဲ အလုပ်သွားလိုက်ရတာမျိုးတွေ၊ ဖတ်လက်စစာအုပ်ကိုချထားပြီး တခြားအလုပ်ကိစ္စတွေ လုပ်စရာမလိုတာကြောင့် စာအုပ်ကို တမုန်းဖတ်လိုက်ပါ …. ။
(၃) Home party လုပ်ပါ
ကိုယ့်လိုမျိုး အပြင်မထွက်၊ အိမ်တွင်းပုန်းလုပ်နေတဲ့ သူငယ်ချင်းတွေစုပြီး တစ်ရက်လောက် အိမ်မှာပါတီလုပ်ပါ။ အပြင်ထွက်လည်တာထက် ပိုပျော်စရာကောင်းတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်ပြီး အကုန်အကျလည်း ပိုသက်သာပါတယ်။ဒါကြောင့် တခြားဟာတွေမလုပ်ရင်တောင် ဒီအစီအစဉ်တော့မဖြစ်မနေလုပ်သင့်ပါတယ်နော် …. ။
ဒီလို ဆက်တိုက်နားရတဲ့ရက်ဆိုတာ တစ်နှစ်လုံးမှ တစ်ခါပဲရတာမဟုတ်လား။ ဒီတော့ အရင် မအားခဲ့တုန်း မအားလို့ဆိုပြီး မစဉ်းစားဖြစ်ခဲ့တာလေးတွေ စဉ်းစားကြည့်ပါ။ ဥပမာ – ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့၊ ပညာရပ်အသစ်တစ်ခုထပ်သင်ယူဖို့ စသဖြင့်ပေါ့။ ကိုယ်ပိုင်စီးပွားရေးလုပ်ဖို့ လိုအပ်မယ့်အရာတွေ၊ အရည်အချင်းတွေက ဘာတွေဖြစ်နိုင်လဲ၊ ပညာရပ်အသစ်တစ်ခုထပ်သင်ဖို့ ဘယ်ပညာက ကိုယ်နဲ့ကိုက်ညီပြီးရေရှည်အသုံးမလဲ စတာလေးတွေ ချရေးကြည့်ပါ။ နားနားနေနေ နေရင်းက မထင်မှတ်ဘဲ အောင်မြင်မှုရဲ့လမ်းစတစ်ခုကိုတွေ့သွားနိုင်ပါတယ် … ။
ဒီလိုအားလပ်ရက်တွေဟာ ကိုယ့်အပိုင်နားရက်တွေဖြစ်တဲ့အတွက် ကိုယ်မကြိုက်မနှစ်သက်တဲ့၊ ကိုယ်မလုပ်ချင်တာတွေ ဘာလို့လုပ်နေမှာလဲ။ တစ်နေကုန်ကိုယ်ကြိုက်တာတွေပဲ လုပ်လိုက်ပါ။ မနက်အိပ်ရေးဝအောင်အိပ်ပြီး စာအုပ်လေးဘာလေးဖတ်၊ ရုပ်ရှင်လေးကြည့်၊ မုန့်လေးစား၊ ပြန်အိပ် အဲ့ဒီလိုလေး နေလို့ရတယ်နော်။ ဇိမ်ပဲ …. ။
ကိုယ်ကြိုက်တာပဲလုပ်ပြီးနေတာကလည်း ငြီးငွေ့နိုင်ပါတယ်။ အဲ့ဒီလို ငြီးငွေ့လာပြီဆိုရင် အိမ်သန့်ရှင်းရေးလေးဘာလေးလုပ်ပါ။ တစ်နှစ်လုံးမရှင်းဘဲထားထားတဲ့ နေရာလေးတွေ၊ အ၀တ်ဗီရိုနဲ့ အမှတ်တရပစ္စည်းလေးတွေကို ထုတ်ရှင်းပြီး အတိတ်အကြောင်းလေးဘာလေးတွေးနိုင်ပါသေးတယ်။ ပြီးရင်တော့ အခန်းတွင်းအပြင်အဆင်လေးတွေ ပြောင်းလဲလိုက်တာမျိုးလည်း လုပ်နိုင်ပါသေးတယ်။ ဒီလိုလုပ်လိုက်တော့ ကိုယ်နေတဲ့နေရာလေးလည်း သန့်ရှင်းသွားပြီး ငြီးငွေ့တာကိုလည်း ပြေပျောက်စေကာ၊ စိတ်ကိုလန်းဆန်းစေပါတယ် …. ။
အိမ်မှာ အေးအေးဆေးဆေးရှိတဲ့အချိန်တွေမှာ တစ်ယောက်တည်းဓာတ်ပုံရိုက်လို့ရပါတယ်။ တစ်ယောက်တည်းမို့ နည်းနည်းတော့ ခက်ခဲတယ်ဆိုပေမယ့် ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံစံ၊ အနေအထားရဖို့ ကြိုးစားနေရတာက ပျော်ဖို့ကောင်းပါတယ်။ Instagram တို့ Pinterest တို့ကနေ Indoor ပုံလေးတွေလိုက်ရှာကြည့်ပြီး ကိုယ်လိုချင်တဲ့ပုံမရမချင်းရိုက်ကြည့်ပါ။ ကိုယ့်စိတ်ကြိုက်ရရင် အရမ်းပျော်ဖို့ကောင်းတာသိရပါလိမ့်မယ်။ ရိုက်ပေးမယ့်သူငယ်ချင်းရှိရင်တော့ အတိုင်းထက်အလွန်ပေါ့ …. ။
ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြန်သုံးသပ်ဖို့ဆိုတာ အချိန်များများရှိဖို့လိုသလို အေးအေးဆေးဆေးဖြစ်နေဖို့လည်းလိုပါတယ်။ ဒီတော့ ဒီအချိန်က ကိုယ့်အကြောင်းကိုယ်ပြန်စဉ်းစားဖို့ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုသုံးသပ်ဖို့အကောင်းဆုံးအချိန်ပါပဲ။ တစ်ခုရှိတာက ကိုယ့်အကြောင်းကိုမှန်မှန်ကန်ကန်တွေးပြီး အရှိအတိုင်းသုံးသပ်ကြည့်ပါ။ အဲ့ဒါမှ ကိုယ် ကောင်းတာတွေဘယ်လောက်လုပ်ထားပြီး မကောင်းတာတွေဘယ်လောက်လုပ်ထားလဲဆိုတာ သေချာသိရမှာပါ။ ဒါကလည်း ကိုယ့်အတွက်အရမ်းအကျိုးရှိတယ်နော် …. ။
သင်ျကွနျလိုအခြိနျမြိုးကို တဈယောကျတညျးအိမျတှငျးပုနျးပွီးဖွတျသနျးဖို့ဆိုတာ တျောတျောကိုမလှယျတဲ့ကိစ်စပါ။ သူမြားတှကေ အပွငျထှကျကဲနကွေတဲ့အခြိနျမှာ ကိုယျတဈယောကျတညျး အိမျမှာနနေရေတာက တဈယောကျတညျးနရေတာ ကွိုကျတဲ့သူတောငျ စိတျထဲမှာတဈမြိုးဖွဈနတေတျပါတယျ။ ဒါပမေယျ့ အကွောငျးအမြိုးမြိုးကွောငျ့ အပွငျထှကျလညျဖို့ထကျ အိမျတှငျးပုနျးဖို့ကိုပဲရှေးခယျြလိုကျတဲ့ သူလေးတှအေနနေဲ့ ဒီအခြိနျကို စိတျအနှောကျအယှကျကငျးကငျးနဲ့ ဘယျလိုဖွတျသနျးမလဲဆိုတာ ကွိုစီစဉျထားဖို့လိုပါတယျ။ ဒါကွောငျ့ သင်ျကွနျမှာ အိမျတှငျးပုနျးမယျ့သူလေးတှေ အခြိနျကိုအကောငျးဆုံးအသုံးခနြိုငျမယျ့ နညျးလမျးကောငျးလေးတှကေို ဖျောပွပေးလိုကျပါတယျ …. ။
ဒီအခြိနျမှာ ကိုယျအပွငျမထှကျပမေယျ့ အပွငျကအခွအေနတှေအေားလုံးကို တီဗှီအစီအစဉျတှကေနတေဆငျ့ကွညျ့လို့ရပါတယျ။ တကယျလို့ လကျရှိအခွအေနကေို မကွညျ့ခငျြဘူး၊မသိခငျြဘူးဆိုရငျလညျး ကိုယျကွိုကျတဲ့ဇာတျကားတှကွေညျ့ပါ။ သူငယျခငျြးတှဆေိုတာကလညျး သူတို့အာရုံနဲ့သူတို့ဖွဈနကွေတဲ့အခြိနျ၊ ကိုယျ့ကိုနှောကျယှကျမယျ့သူမရှိတဲ့အခြိနျမို့ ဒီအခြိနျလောကျရုပျရှငျတှေ၊ ဇာတျကားတှကေို ခံစားလို့ကောငျးတာမရှိတော့ပါဘူး …. ။
စာအုပျဖတျရတာ ကွိုကျတဲ့သူတှကေတော့ ဒီအခြိနျကစာအုပျဖတျလို့အကောငျးဆုံးပါပဲ။ ပိတျရကျတှကေ ဆကျတိုကျမို့ စာအုပျကိုမပွီးဘဲ အလုပျသှားလိုကျရတာမြိုးတှေ၊ ဖတျလကျစစာအုပျကိုခထြားပွီး တခွားအလုပျကိစ်စတှေ လုပျစရာမလိုတာကွောငျ့ စာအုပျကို တမုနျးဖတျလိုကျပါ …. ။
(၃) Home party လုပျပါ
ကိုယျ့လိုမြိုး အပွငျမထှကျ၊ အိမျတှငျးပုနျးလုပျနတေဲ့ သူငယျခငျြးတှစေုပွီး တဈရကျလောကျ အိမျမှာပါတီလုပျပါ။ အပွငျထှကျလညျတာထကျ ပိုပြျောစရာကောငျးတဲ့အစီအစဉျဖွဈပွီး အကုနျအကလြညျး ပိုသကျသာပါတယျ။ဒါကွောငျ့ တခွားဟာတှမေလုပျရငျတောငျ ဒီအစီအစဉျတော့မဖွဈမနလေုပျသငျ့ပါတယျနျော …. ။
ဒီလို ဆကျတိုကျနားရတဲ့ရကျဆိုတာ တဈနှဈလုံးမှ တဈခါပဲရတာမဟုတျလား။ ဒီတော့ အရငျ မအားခဲ့တုနျး မအားလို့ဆိုပွီး မစဉျးစားဖွဈခဲ့တာလေးတှေ စဉျးစားကွညျ့ပါ။ ဥပမာ – ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျဖို့၊ ပညာရပျအသဈတဈခုထပျသငျယူဖို့ စသဖွငျ့ပေါ့။ ကိုယျပိုငျစီးပှားရေးလုပျဖို့ လိုအပျမယျ့အရာတှေ၊ အရညျအခငျြးတှကေ ဘာတှဖွေဈနိုငျလဲ၊ ပညာရပျအသဈတဈခုထပျသငျဖို့ ဘယျပညာက ကိုယျနဲ့ကိုကျညီပွီးရရှေညျအသုံးမလဲ စတာလေးတှေ ခရြေးကွညျ့ပါ။ နားနားနနေေ နရေငျးက မထငျမှတျဘဲ အောငျမွငျမှုရဲ့လမျးစတဈခုကိုတှသှေ့ားနိုငျပါတယျ … ။
ဒီလိုအားလပျရကျတှဟော ကိုယျ့အပိုငျနားရကျတှဖွေဈတဲ့အတှကျ ကိုယျမကွိုကျမနှဈသကျတဲ့၊ ကိုယျမလုပျခငျြတာတှေ ဘာလို့လုပျနမှောလဲ။ တဈနကေုနျကိုယျကွိုကျတာတှပေဲ လုပျလိုကျပါ။ မနကျအိပျရေးဝအောငျအိပျပွီး စာအုပျလေးဘာလေးဖတျ၊ ရုပျရှငျလေးကွညျ့၊ မုနျ့လေးစား၊ ပွနျအိပျ အဲ့ဒီလိုလေး နလေို့ရတယျနျော။ ဇိမျပဲ …. ။
ကိုယျကွိုကျတာပဲလုပျပွီးနတောကလညျး ငွီးငှနေို့ငျပါတယျ။ အဲ့ဒီလို ငွီးငှလေ့ာပွီဆိုရငျ အိမျသနျ့ရှငျးရေးလေးဘာလေးလုပျပါ။ တဈနှဈလုံးမရှငျးဘဲထားထားတဲ့ နရောလေးတှေ၊ အဝတျဗီရိုနဲ့ အမှတျတရပစ်စညျးလေးတှကေို ထုတျရှငျးပွီး အတိတျအကွောငျးလေးဘာလေးတှေးနိုငျပါသေးတယျ။ ပွီးရငျတော့ အခနျးတှငျးအပွငျအဆငျလေးတှေ ပွောငျးလဲလိုကျတာမြိုးလညျး လုပျနိုငျပါသေးတယျ။ ဒီလိုလုပျလိုကျတော့ ကိုယျနတေဲ့နရောလေးလညျး သနျ့ရှငျးသှားပွီး ငွီးငှတေ့ာကိုလညျး ပွပြေောကျစကော၊ စိတျကိုလနျးဆနျးစပေါတယျ …. ။
အိမျမှာ အေးအေးဆေးဆေးရှိတဲ့အခြိနျတှမှော တဈယောကျတညျးဓာတျပုံရိုကျလို့ရပါတယျ။ တဈယောကျတညျးမို့ နညျးနညျးတော့ ခကျခဲတယျဆိုပမေယျ့ ကိုယျလိုခငျြတဲ့ပုံစံ၊ အနအေထားရဖို့ ကွိုးစားနရေတာက ပြျောဖို့ကောငျးပါတယျ။ Instagram တို့ Pinterest တို့ကနေ Indoor ပုံလေးတှလေိုကျရှာကွညျ့ပွီး ကိုယျလိုခငျြတဲ့ပုံမရမခငျြးရိုကျကွညျ့ပါ။ ကိုယျ့စိတျကွိုကျရရငျ အရမျးပြျောဖို့ကောငျးတာသိရပါလိမျ့မယျ။ ရိုကျပေးမယျ့သူငယျခငျြးရှိရငျတော့ အတိုငျးထကျအလှနျပေါ့ …. ။
ကိုယျ့ကိုယျကိုပွနျသုံးသပျဖို့ဆိုတာ အခြိနျမြားမြားရှိဖို့လိုသလို အေးအေးဆေးဆေးဖွဈနဖေို့လညျးလိုပါတယျ။ ဒီတော့ ဒီအခြိနျက ကိုယျ့အကွောငျးကိုယျပွနျစဉျးစားဖို့ ကိုယျ့ကိုယျကိုသုံးသပျဖို့အကောငျးဆုံးအခြိနျပါပဲ။ တဈခုရှိတာက ကိုယျ့အကွောငျးကိုမှနျမှနျကနျကနျတှေးပွီး အရှိအတိုငျးသုံးသပျကွညျ့ပါ။ အဲ့ဒါမှ ကိုယျ ကောငျးတာတှဘေယျလောကျလုပျထားပွီး မကောငျးတာတှဘေယျလောကျလုပျထားလဲဆိုတာ သခြောသိရမှာပါ။ ဒါကလညျး ကိုယျ့အတှကျအရမျးအကြိုးရှိတယျနျော …. ။
Previous: ယခုနှစ် တစ်နိုင်ငံလုံးအနေဖြင့် ” ၁၀ တန်း အောင်ချက်များ ကျဆင်း ” ….
Next: အိမ်မြှောင်အသားစားသုံးခြင်းဖြင့် ရရှိလာမယ့် အံ့မခန်းအကျိုးကျေးဇူး (၁၀) မျိုး